सामाजिक विभेदविरुद्ध '६ पात्रको एकालाप'- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
मानवलाई मानव नदेख्ने, महिला शरीरलाई भौतिक उपभोग्य बस्तु देख्ने र रंगका आधारमा सुन्दरताको परिभाषा निर्माण गर्ने सामाजिक संरचनाविरुद्ध आवाज उठाएको छ नाटकले ।
काठमाडौँ — म बोल्दैछु आज
म बोल्दैछु आज
के तिमी सुन्न तयार छौ?
तयार छौ ?
यो मेरो एकालाप
यो मेरो जीवनको राग…
मधुर हुँदै गरेको यो संगीतसँगै मञ्चमा उनी देखा पर्छिन् । मनमा गुम्सिएका अनेकन प्रश्न लिएर । श्यामश्वेत वर्णकी उनको आँखामा प्रश्नै प्रश्न छन् । कालो भएकै कारण कोही राम्रा त कोही नराम्रा । रंगका आधारमा सुन्दरताको परिभाषा र रंगभेद उनी बुझ्दिनन् ।
राम्रो र नराम्रोबीचको सम्बन्धमा रंग कसरी मिसियो पहिल्याउन सक्दिनन् । उनी प्रश्न गर्छिन्,'एउटालाई मन परेको खाना, अर्कोलाई मनपर्दैन भने, एउटालाई मन नपरेको मान्छे अर्कोलाई मनपर्छ भने, एउटालाई मन नपरेको रंग अर्कोलाई मनपर्छ भने कसरी एउटै हुन्छ सुन्दरताको परिभाषा ? कसले रच्यो यो विभेदको कथा ? सेतो राम्रो, कालो नराम्रो !'
रंगकै आधारमा समाजमा थिचिएका वर्गको प्रतिबिम्ब हन् उनी । वर्षौंदेखि मानिस हेपिएका र पेलिएका छन् । सेतो रंगले कालो रंगलाई हेला गर्ने हाम्रो समाज । प्रविधिले फड्को मारिसक्दा पनि समाजमा विद्यमान विभेदविरुद्धकी आवाज हुन् उनी । उनी आफ्नो कालो छालालाई निर्धक्क राम्रो भन्न सक्दिनन् । किनकि समाजले दिने 'राम्रो'को परिभाषामा उनी अटाउँदिनन् ।
समाजको यही दृष्टिकोण, संरचनाविरुद्धको विद्रोही आवाज लिएर उनी समाजसँग उत्तर खोज्दैछिन्,'किन सबै नराम्रो प्रतीकको रंग कालै हुन्छ ?, कसरी हुन्छ सेतो रंग राम्रोको पर्याय?'
रंगमाथि हुने विभेद र अवहेलनाकी प्रतिनिधि पनि हुन् उनी । सेतो रङ्गको गोलो घेरा(प्रप्स) । त्यही घेरामा बसेर उनी यस्ता अनेकन प्रश्न गर्दैछिन् । त्यो घेरा उनी तोड्न सक्दिनन् । घेराले सामाजिक संरचना, दृष्टिकोण अनि सीमाको प्रतिनिधित्व गर्छ । कालो रंगलाई यो समाजले अझै सुन्दर देख्न सकेको छैन । यही परम्परागत मान्यतामाथि कटाक्ष गर्छिन् उनी । उनी अर्थात 'छ पात्र'मध्यकी एक ।
माघ १ गतेदेखि शिल्पी थिएटरमा मञ्चनरत नाटक 'छ पात्रको एकालाप'ले असमानता, विभेद र हिंसाका यस्तै फरक-फरक मुद्दालाई अभिव्यक्त गर्छ । मञ्चमा देखिने ६ पात्रका आफ्नै वेदना, पीडा र समस्या छन् । उनीहरुका एकालापमा पोखिएका छन् समाजका समस्या, पीडितका आवाज ।
जात, लिङ्ग, वर्णकै आधारमा हुने विभेदको कथा बोकेर उभिन्छन् उनीहरु त्यही घेराभित्र । त्यही सामाजिक संरचनाको साङ्लोले उनीहरु घेरिएका छन् । दबिएका छन् । छ पात्र हाम्रो समाजको ऐना जस्ता देखिन्छन् । फरक–फरक मुद्दामा हाम्रा समाजको अनुहार प्रस्तुत छ नाटकमा । पात्रहरुले आफैँसँग गर्ने प्रश्न, उनीहरुका विचार, दृष्टिकोण र हाउभाउमा समाजका अनेकौं पात्रहरु भेटिन्छन् ।
महिलामाथि हुने लैङ्गिक विभेद र महिलाका शरीरको टिप्पणीदेखि जातका आधारमा हुने विविध पक्षलाई पत्रपत्र केलाउँदै पात्रहरुले समाजको कुरुप अनुहार यो नाटकमार्फत देखाउन खोजेको छ । 'किन एकथरी मान्छेलाई प्रेम गरेको आधारमा हत्या गरिन्छ,' जातका कारण विभेदमा परेकी अर्की पात्रले प्रश्न गर्दा दिमागमा नवराज विक झलझली आउँछ । जो कथित माथिल्लो जातकी युवतीसँग प्रेम गरेकै आधारमा मारिए । नवराजहरुलाई जातकै आधारमा माया गर्न नदिने यो संकुचित र अमानवीय सोचलाई व्यङ्ग्य गर्छिन् उनी ।
घिमिरे युवराजको लेखन तथा निर्देशनमा तयार भएको नाटक महिलामाथि भइरहेको हिंसा, विभेद र पीडाको एकमुष्ट रुप हो । मञ्चमा उभिने हरेक पात्रका कहानी र दु:ख फरक छन् । उनीहरुले भोगेको विभेद र हिंसाका मुद्दा उस्तै छैन । सामाजिक संरचनाले उत्पन्न गराउने यी नै समस्याहरुमाथि नाटकले सोच्न बाध्य गराउँछ ।
मानवलाई मानव नदेख्ने, महिला शरीरलाई भौतिक उपभोग्य बस्तु देख्ने र रंगका आधारमा सुन्दरताको परिभाषा निर्माण गर्ने सामाजिक संरचनाविरुद्ध आवाज उठाएको छ नाटकले । मूल विषयवस्तु अधिकांश महिला केन्द्रित भएकाले नाटक महिलावादी जस्तो लाग्छ । जे होस् निर्देशक घिमिरेले महिलाका यी विषयवस्तुलाई न्यायपूर्ण ढंकले नाटकमा उतारेका छन् ।
पवित्रा खड्काको कोरियोग्राफीमा तयार भएको यस नाटकमा कलाकारहरु पवित्रा खड्का, संगिता उराँव, नम्रता अर्याल, साहिना भट्टराई, सुहाना आचार्य र सुमित्रा लामिछानेको अभिनय छ । नाटकमा पवित्रा र संगिताको अभिनय जीवन्त लाग्छ । नाटकमा प्रयोग गरिएका संगीत भने मन छुने र विषयवस्तुसँग मिल्ने छन् ।
कोरोना महामारीका कारण १० महिना बन्द भएको नाटकघर खुलेपछि मञ्चन भएको यो पहिलो नाटक हो । माघ १० गतेसम्म नाटक मञ्चन गरिने बताइएको छ ।
प्रकाशित : माघ ६, २०७७ १४:३३
ललितपुरको चाँगाथलीमा दम्पती मृत भेटिए
काठमाडौँ — ललितपुरको चाँगाथलीमा एक दम्पती मृत भेटिएका छन् । महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर ७, चाँगाथलीमा डेरा गरी बस्ने एक दम्पती मृत फेला परेको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रवक्ता एसपी प्रज्ज्वल महर्जनले जानकारी दिए ।
एसपी खड्काका अनुसार सोमबार ११ बजेतिर रमेश खड्काको घरमा भाडामा बस्ने सप्तरीको राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थायी घर भएका ३२ वर्षीया सागर पोखरेल र २० वर्षीया श्रीमती निर्मला खनाल(पोखरेल) कोठामा मृत भेटिएको उनले बताए । कोठाभित्रबाट चुकुल लगाइएको अवस्थामा उनीहरु मृत भेटिएको प्रहरीले बताएको छ ।
अनुसन्धानमा खटिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटाका अनुसार कोठामा सेल्फस नामक विषादीको खाली बट्टा भेटिएको थियो ।
त्यस्तै बान्ता गरेको जस्तो देखिने पदार्थसमेत फेला पारिएको र घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान जारी रहेको पनि प्रहरीले बताएको छ ।
प्रकाशित : माघ ६, २०७७ १४:१३